True Beauty – Gold Channel Movies
Episode 1 Dec. 09, 2020
Episode3Dec. 23, 2020
Episode4Dec. 30, 2020
Episode5Jan. 06, 2021
Episode6Jan. 13, 2021
Episode 8 Jan. 27, 2021
Episode9Feb. 03, 2021
Episode 10 Feb. 10, 2021
Episode 11 Feb. 17, 2021
Episode 12 Feb. 24, 2021
Episode 13 Mar. 03, 2021
Episode 14 Mar. 10, 2021
Episode 15 Mar. 17, 2021
Episode 16 Mar. 24, 2021
ပရိသတ်တွေစောင့်စားနေကြတဲ့ True Beauty ကို TvN ရုပ်သံကနေ အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဓဟူးနဲ့ကြာသာပတေးတွေမှာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပြီး Gold Channel ကနေ ဘာသာပြန်တင်ဆင်ပေးသွားမှာပါ။
အထက်တန်းကျောင်းသူလေး Lim Ju-gyeong ဟာ သူမရဲ့ မလှပတဲ့ရုပ်ရည်ကြောင့် YouTube ကနေ မိတ်ကပ်ပြင်နည်းများစွာကို ကြည့်ရှုပြီး လှပတဲ့မိန်းမပျိုလေးအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ ထူးချွန်လှတဲ့မိတ်ကပ်ပညာကြောင့် ကျောင်းမှာ အလှနတ်မိမယ်တစ်ပါးအဖြစ်ကျော်ကြားလာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူမရဲ့နဂိုရုပ်ကို အတွေ့ခံမဲ့အစား သေပစ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ Character မျိုးပါ။
Lee Su-ho ကတော့ သူရဲ့အတိတ်ကအဖြစ်အချို့ကြောင့် အေးတိအေးစက်နိုင်တယ်လို့ထင်ရပေမယ့် နွေးထွေးပြီးဂရုစိုက်တတ်တဲ့လူမျိူးပါ။ Lim Ju-gyeong ရဲ့ နဂိုမူလရုပ်ရည်ကို မြင်ဖူးထားတဲ့ကောင်လေးပါ။ သူရဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရုပ်ရည်..ဘဝပေးအခြေအနေတွေကြောင့် အလေးပေးကြတဲ့သူတွေအစား တကယ့်မေတ္တာနဲ့နွေးထွေးပေးနိုင်မယ့်သူကို လိုချင်တဲ့သူပါ။
Han Seo-jun ကတော့ ခပ်မိုက်မိုက်ကျောင်းသားလေးနေရာကပါ။ စိတ်ရင်းကောင်းပေမယ့် ဂျစ်တစ်တစ်ဆန်တဲ့စရိုက်လေးက ဆူဟိုနဲ့ အရင်ကရှိခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေကြောင့် ပိုပြီးပီပြင်ဦးမှာပါ။ ဆိုင်ကယ်စီးပြီး အပျိုတွေရဲ့အသည်းကိုခြွေမယ့် လူဆိုးလေးပေါ့။
Kang Su-jin ကတော့ သဘာဝအလှပိုင်ရှင်လေးဖြစ်ပြီး ချမ်းသာတဲ့မိသားစုကနေမွေးဖွားလာတဲ့သူအဖြစ်က ပါဝင်ထားပါတယ်။ သူမဟာ Lim Ju-gyeong နဲ့သူငယ်ချင်းဖြစ်လာခဲ့ပြီး လေးပွင့်ဆိုင် အချစ်ဇာတ်လမ်းအဖြစ်သို့ ကူးပြောင်းသွားမလားဆိုတာကြည့်ရှုရမှာပါ။
ကျောင်းသားကားလေးဖြစ်ပြီး နာမည်ကြီး Webtoon ကို live action အဖြစ်ပြန်လည်အသက်သွင်းထားတဲ့အပြင် သရုပ်ဆောင်တွေကလည်း နာမည်ကြီးတွေပဲမလို့ GC Team နဲ့အတူတူ အပတ်စဉ် ကြည့်ရှုခံစားပေးကြပါဦးနော်။
William KyawJune 17, 2021Reply
Linkအားလုံးသေနေလို့1080p link လေးတွေပြန်ပြင်ပေးပါအုံးကျေးဇူးပြု၍
Su Lae WaiFebruary 18, 2021Reply
Ep 15 & 16 please
MaggieFebruary 24, 2021Reply
AshlayFebruary 6, 2021Reply
ZerotowJanuary 14, 2021Reply
hmu zawDecember 16, 2020Reply
no ep3yet today is wed’s day
Kyaw ChanDecember 10, 2020Reply
Dance of the Phoenix (2020) ????????????????